PressReader - Ilanga langeSonto: 2017-09-10 - Bagxekiwe osaziwayo ngokulilela uchillies
Bagxekiwe osaziwayo ngokulilela uchillies
EZOSAZIWAYO: Kuthiwa bagqugquzela ubugebengu
“MINA ngimazi ezithandela isitayela, ehlanzekile futhi ezithandela nomculo njengoba njalo uma kunengoma entsha ubengicela ukuba ngimtholele yona. Nale yami ezophuma ngesonto elizayo bese ngimnikile yona njengoba engithumelele ne- video eyidansela emzini wakhe kanti uzoshona ngakusasa.”
Lawa ngamazwi ka-andile Chili, odume ngelikadj Boonu, osebenza kakhulu nabaculi baseAfrotainment katira nabasewest Ink kamampintsha.
Ube nengxoxo ekhethekile neLANGA Langesonto emuva kokushona kosolwa ngobugelekeqe, usandile “Chillies” Bhengu, obengcwatshwa izolo.
Indaba kachillies ibisematheni kusukela maphakathi nesonto eledlule. Imibiko yamaphoyisa ithe udutshulwe washona ngoLwesithathu emuva kokuficwa esigcemeni sakwab emlazi ekutakuta isiqophamkhondo ( tracker) emotweni ebiyebiwe.
UDJ Boonu ungomunye wosaziwayo abazwakalise ukulila kwabo emuva kwezindaba zokubulawa kukachillies waze wafaka ezinkundleni zokuxhumana amakepisi anegama lakhe (Chillies), athi aphumule ngokuthula.
Basoliwe ezinkundleni zokuxhumana osaziwayo abaningi ngokulila kwabo, begqamisa ubumnene bukachillies. Lokhu kulila kwabo kubenze babukeka sengathi beseka isela. Ukusondelana kwakhe nochillies, UDJ Boonu ukufakazise na- ngemiyalezo abebethumelelana yona kuwhatsapp.
“Sonke sikhulele emlazi, nami ubengikhonzile njengawo wonke umuntu abemkhonzile. Uma nisakhula sisuke singekho isiqiniseko sokuthi umuntu uyogcina kuphi njengoba nami ngangifisa ukuba ngudokotela kodwa akwangenzeka.
“Kuyafana futhi nokuthi omunye enikhula naye angaqedi no- matric kodwa abanye bagcine bengamaprofessional. Nezimo futhi esikhula phansi kwazo kazifani. Umqwayizi nje wayengazi ukuthi uyogcina khona kodwa ngenxa yezimo zempilo aphelele lapho,” kulanda uboonu.
“Sonke siyazi ukuthi ubugebengu buhambisana nokufa yingakho singeke nanini sabugqugquzela kodwa sigqugquzela imfundo. Ngabe ngiyezwa ukuba umuntu usolwa nje yingoba ubemncoma ngabekwenza kodwa kakunjalo.
“Uyabona njengoba esehambile kakukho okusazoshintsha, ubenomoya omuhle kwabebemazi, ethandwa nayizingane ezincane. Noma kunengxabano eklabhini bekuthi uma kuthintwe yena ayixazulule ngokuthula ngale kokulwa nokubanga umsindo.
“Nabebentshontshelwe izimoto, bebethinta yena bagcine bezithola. Simazi ewumuntu olunge kanjaloke thina ngakho kulabo abasisola ngokukhala kwethu siyaxolisa, thina kaseseki ubugebengu kodwa sikhalela ubuntu bakhe ebesibubona,” kuchaza uboonu.
Uthi namakepisi lawa abhalwe igama lakhe uchillies abonakale sengathi enziwe manje ngoba ebhalwe ukuthi ulale ngokuthula, kade bawenza (eliveza nakuwhatsapp wangojuly).
“Kukhona namajakhethi ngoba sasixoxa indaba yokuthi ngoba uthandwa ngabantu mhlawumbe bangagcina sebezithenga lezi zimpahla ezinegama lakhe. Yilo mbhalo othi uphumule ngokuthula kuphela engiwengeze kula makepisi,” usho kanje.
Ugcizelele ukuthi kufanele abantu bakuqonde ukuthi bona bakhuluma abakwaziyo ngochillies hhayi ngoba beseka ubugebengu okuthiwa ubebenza.
UDJ Boonu obenobudlelwano nochillies